Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Stephen Asiimwe ga-eduga ngalaba njem nlegharị anya nkeonwe Uganda
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • WTN
Board of Directors of the Uganda Private Sector Foundation na-ekwupụta nhọpụta nke Mr. Stephen Asiimwe, dị ka onye isi nchịkwa ọhụrụ ya.
Ọ nọchiri Mazị Gideon Badagawa nwụrụ anwụ n'ọnwa Juun afọ a.
Mazị Assimwe bụ onye ndu ama ama maka njem nlegharị anya Uganda ma bụrụkwa onye a na-asọpụrụ n'ụwa niile. Ihu ya bụ ihu nke njem nlegharị anya Uganda n'ọtụtụ ihe ngosi na ihe omume njem njem na njem, mgbe site na 2014 ruo 2019, Asiimwe rụrụ ọrụ dị ka onye isi nchịkwa na Uganda Tourism Board (UTB).
Francis Kisirinya bụ onye na-achịkọta onye isi ala kemgbe Badagawa nwụrụ n'afọ a na June.
Dị ka Dr. Elly Karuhanga, onye isi oche oche PSFU si kwuo, nhọpụta ahụ na-amalite ozugbo. Tupu nhọpụta ya, Asiimwe bụ onye nduzi amụma na mmepe azụmahịa na PSDU.
N'ịbụ onye nwere ahụmahụ na akwụkwọ akụkọ, bụ onye isi nchịkwa na onye nchịkọta akụkọ nke East African Business Week site na 2004 ruo 2014. Ọ rụkwara ọrụ na New Vision dị ka onye nta akụkọ, onye nchịkọta akụkọ, na Business Editor site na 1993-2004.
O nwere akara ugo mmụta Master na nhazi nhazi na njikwa sitere na United States Development Associates International (DAI) nke jikọrọ Uganda Christian University (UCU). Ọ bụkwa onye gụsịrị akwụkwọ na nzere bachelọ na Social Sciences gụsịrị akwụkwọ na Sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Sociology na Mahadum Makerere.
Asiimwe nwere ahụmịhe afọ 30 na mpaghara gọọmentị na nkeonwe na ọkwa njikwa, onye isi na ọkwa azụmaahịa.
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa kelee Mazi Assimwe. Nke a bụ Juergen Steinmetz, onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ kwadoro nke a Network Njem Nleta Ụwa, na onye na-ebipụta eTurboNews: “Mr. Asiimwe abụrụla enyi kemgbe ọtụtụ afọ. Enwere m obi ike na nhọpụta a bụ nnukwu ihe ịga nke ọma ọ bụghị naanị maka Stephen, kama maka njem nlegharị anya Uganda kpam kpam.